Fifampiarahabana eny Iavoloha:STYLISTA MARO NO NANOLOTRA AKANJO HO AN’NY VADIN’NY FILOHA -
AccueilRaharaham-pirenenaFifampiarahabana eny Iavoloha:STYLISTA MARO NO NANOLOTRA AKANJO HO AN’NY VADIN’NY FILOHA
06/01/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Amin’ny zoma izao no hanatanterahana ny fifampiarahabana ofisialy nahatratra ny taona vaovao iarahana amin’ireo masoivoho vahiny sy ireo andrim-panjakana atao eny Iavoloha. Efa fomba fanao mahazatra isan-taona izany. Amina tranga tahaka ireny dia reharehan’ny “styliste” ary tena voninahitra ho azy raha ny asa tanany no anaovan’olona malaza amina firenena iray, ohatra amin’izany ny vadina Filoham-pirenena. Matetika no mandroso soso-kevitra ireny “styliste” ireny hoe ity no mba tiako anaovanao amina fotoana tahaka izatsy na izaroa. Efa mahalala fandaharam-potoana mialoha ihany koa izy ireny ahafahany mihaona amin’ilay olona tiany hanao ny asa tanany. Tsy vidina na sandaina vola fa ilay lazany amin’ny fitondran’ilay olona an’iny akanjo iny no sandany, satria tsy maintsy hisy ny fanontaniana an’iny akanjo iny avy eo hoe iza no nanao azy, tena tsara, sns…Fampahatsiahivana ihany no ilazana fa matetika no maka tahaka ireo olona malaza any ivelany no tena ataon’ireo vahiny manan-kaja asaina amina zavatra lehibe tahaka ireny.
Misy toe-tsaina lomorina
Tamin’ny fotoanan’ny Tetezamita izao dia naka tahaka ny akanjon’i Jennifer Lopez noforonin’i Roland Mouret, ny vadin’ny Filohan’ny Tetezamita, Mialy Rajoelina dia iza moa no nanakiana azy nefa izy aza vadina filoham-pirenena tsy lanim-bahoaka ara-pomba demokratika tamin’ireny? Tsy izay ihany fa rehefa nanaovana fikarohana dia teo anelanelan’ny 500 Euros ka hatramin’ny 2 000 Euros ny vidin’ilay akanjo mitovy amin’ny an’i Jennifer Lopez nefa nampaninona ny olona izany ? Misy amin’ireo vadina Praiminisitra na vadina Filohana andrim-panjakana hafa mety lafo lavitra noho ny an’ny vadin’ny Filoham-pirenena ny akanjo anaovany kanefa dia tsy misy resaka na dia kely aza. Mahagaga fa ny an’ny sasany dia miaro fialonana sy fankahalana ny fihetsika dia tsikeraina hatramin’ny akanjo anaovana. Fomba fisainana lomorina izany satria tsy mba olona tia fivoarana. Ny vahoaka frantsay tsy andeha hanaratsy ny akanjo anaovan’ny vadin’ny Filoham-pireneny mihitsy, tahaka izany koa ny vahoaka amerikana tsy hanaratsy ny akanjo anaovan’ny vadin’ny Filoham-pirenena mihitsy fa ny eto amintsika dia mahita sampona tsy mba amin’ny zavatra tsara fa amin’ny ratsy. Ny olona manenjika moa tsy any aloha fa any aoriana foana ka dia tsy mahita afa-tsy ny lafy ratsin-javatra izy ireo. Amin’ity fifampiarahabana ity dia tsy ho ambakan’ireo olo-malaza ny vadin’ny Filoha Voahangy Rajaonarimampianina satria betsaka ny “styliste” izay nanolotra akanjo ho azy mba hanaovany amin’io fotoana io e ! Apetraka ihany ny fanontaniana hoe inona no tsara kokoa, ny maka tahaka olona ve sa ny olona mahay mamorona mifanaraka amin’ny tsanganan’ilay olona? Araka ny teny filamatr’ilay sekoly fampianarana zaitra izay hoe « tsy voatery mividy vao miakanjo tsara e ? »